Ny reniranon'i Kupa, Kupa - Ljubljana
Ny reniranon'i Kupa
Faritra Basin: 10.032 km²;
Ny vavany: Sava;
Tetezana: Viaduct Drežnik.
Na dia bitika kely aza i Slovenia dia manan-karena amin'ny fanatanjahantena , anisan'izany ny voajanahary. Anisan'ireny ny reniranon'i Kupa. Io dia fialofana voajanahary eo anelanelan'i Kroasia sy Slovenia, satria mitranga any amin'ireo firenena roa ireo.
Inona ny renirano Kupa?
Any Slovenia, ny reniranon'i Kupa no tena mety ho an'ny Sava. Ny velaran'io renirano io dia 296 km, ary ny dobo -10,032 km². Ny loharanony dia ao amin'ny National Park Risnjak. Anisan'ireo tranobe lehibe indrindra ao amin'ny Kupa ireto manaraka ireto: Good, Clay, Odra, Koran.
Ny faritra Slovenian any amin'ny renirano dia ao amin'ny spa thermal spa Dolenjske Toplice. Ny tombony ho an'i Kupa dia ny hoe ny moron-dranomasiny dia toerana mahafinaritra mpizaha tany. Ankoatr'izany, ny renirano dia manankarena trondro, ka na ny mpanjono tsy manana traikefa aza dia manantena fiovana tsara.
Ny reniranon'i Kupa dia iray amin'ireo madio indrindra sy mafana indrindra any Slovenia, noho izany dia hitondra fahafinaretana sy tombontsoa ny fisakafoanana sy ny fandehanana eny amin'ny renirano. Fisehoan-javatra maro sy fialantsasatra mahafinaritra no atrehina eto, izay tsy ireo mponina ao an-toerana, fa ireo vahiny avy ao Slovenia ihany koa no mandray anjara.
Ny renirano dia noho ny fisian'ny riandrano sy toerana tsara toerana. Ireo tanjona roa ireo dia manintona ireo mpizahatany izay afaka mankafy ny toerana tsara tarehy, mitsidika ireo tanàna malaza sy foibe an-tanàn-dehibe fahiny.
Tany Kroasia, teo amoron'ny renirano, dia nisy tanàna iray manontolo sy toeram-piantsonan'ny herinaratra mpamokatra herinaratra niorina teo ambanin'ny tetikasa Nikola Tesla. Ao amin'ny faritanin'i Slovenia, ao amin'ny faritra atsimo-atsimo atsinanan'i Kupa dia tsy voafatotry ny olona, ​​noho izany dia toerana tsara indrindra hialan-tsasatra izany. Eto dia afaka mahita tohoditra efa 50 ianao na milomano.
Toetran'ny voajanahary voajanahary
Ny hafanan'ny rano amin'ny fahavaratra dia tsy latsaka ambany 30 ° C. Ny hahafantarana an'i Kupa dia tsara indrindra amin'ny lakana, izay azo ampiasaina. Rehefa avy nanao ny rafting ianao, dia ho hitanao ny natiora, manankarena amin'ireo solontenan'ny biby sy ny zavamaniry. Ho an'ny mpizaha tany, ny bisikileta na ny dian-tongotra dia voaomana ihany koa.
Amin'ireo hetsika fialamboly, kayak, rafting na sambo dia mangataka ihany koa. Miala sasatra ny renirano, noho izany dia tsara ho an'ny mpandray anjara na ireo mpikaroka tsy manana traikefa. Ny handao tsy misy fahatsiarovana dia tsy hivoaka izany, noho izany ireo mponina ao an-toerana dia haneho ny vokatra nentim-paharazana nentin-drazana - fanangonana atody an'arivony.
Mba hahatongavana any amin'ny reniranon'i Kupa dia ilaina amin'ny fiara liana, satria ny fitateram-bahoaka tsy mandeha ao.
Ny zaridaina Botanika any Ljubljana
Ny tranom-bakoka ao Ljubljana
Karoka ho an'ny motoblock
25 sandwich tsara indrindra eo amin'ny tantaran'ny sehatry ny haitao
Inona no ilaina amin'ny vovobony bee?
Rindrina convectors elektrika
Ny volafotsy cineraria - mitombo avy amin'ny voa
Fihetseham-po ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka: Prince Andrew dia manana fifandraisana amin'i Demi Moore!
Mpandrindra ny fitomboan'ny volo
Ny fihenan'ny toaka sy ny fitabatabana no mahatonga ny vehivavy
Melon, voatokana ho an'ny ririnina
Fihetseham-bolongana ho an'ny ririnina
Flashlight ho an'ny e-book
Dopplerometry ho an'ny vehivavy bevohoka - indikativa, norm
Mitafy akanjo fotsy
Sambany ny rahavavin'i Delevin dia nanome fanadihadiana lalina momba ny fahazazany
Manamboatra ao amin'ny trano